”Waxaan Somalia u diraynaa ciidan burburiya Al Shabaab” – Ingiriiska oo soo bandhigay qorshe aan horay loo ogayn | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan Somalia u diraynaa ciidan burburiya Al Shabaab” – Ingiriiska oo soo...
”Waxaan Somalia u diraynaa ciidan burburiya Al Shabaab” – Ingiriiska oo soo bandhigay qorshe aan horay loo ogayn
(London) 30 Okt 2021 – Dalka UK ayaa qorshaynaya inuu Somalia u diro ciidamo gaar ah si baa la yiri ay ula dagaallamaan shabakaad argagixiso ah oo halkaa ka jira.
Sida lagu qoray The Mirror, Ingiriiska ayaa doonaya inuu soo diro ciidamo lug ah oo inta badan uu sheegay inay Somalia gacan ka siinayaan dhanka tababarka howlgallada si ay Ciidanka Somalia awood ugu yeeshaan inay dardaraan Shabaabka iyo Daacish, sida warbixinta loo qoray.
saraakiisha Ciidamada Britain ayaa la sheegayaa inay durba gobolka ku sugan yihiin inay qorshaynaya tillaabadan, kaasoo lagu wado in la bilaabo guga 2022-ka oo ku beegan horraanta sanadka soo aaddan.
Tillaabadan ayay sheegeen inaysan toos ula xiriirin khaarajintii Xildhibaan David Amess, 69-jir, oo haataan dilkiisa loo haysto nin Soomaali ah oo la yiraahdo Ali Harbi Ali, oo ah 25-jir kasoo jeeda Somalia, 15kii bishan Oktoobar.
Ingiriiska ayaa sheegay inay awalba Somalia ka joogeen ciidamo yar oo tababara askarta Somalia, balse ay haatan arrintaa sii xoojinayaan.
Reer Galbeedka ayaa marka ay timaado dhismaha ciidanka Somalia waxay inta badan kula dhaqmaan istaraatijiyad ah ”qowda maqashii waxna haw qaban”, waloow ay sidoo kale Somalia hoggaamiso siyaasad kala qoqoban oo keenaysa inay qiil u helaan tillaabadaas.
Previous articleTOOS u daawo: FC Barcelona vs Alaves, Lyon vs Lens – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Waxaan gacanta ku dhignay ciidamo badan & magaalada Dessie!” – Tigreega oo sheegtay inay qabsadeen magaalo muhim ah (Daawo)